W तरीकाहरू जुन तपाई महामारीको समयमा तपाईको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिन सक्नुहुन्छ - फिटनेस छुट
घर » ब्लग » W तरीकाहरू तपाईले आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीको बखत बढाउन सक्नुहुन्छ
COVID-१ going को वरपर घुम्न धेरै धेरै समाचारहरू भइरहेका छन्। जे होस्, आधारभूत समझ यो हो कि यस श्वासप्रश्वासको रोगले कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिहरूमा वा अन्य अवस्थित स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूमा मृत्यु निम्त्याउँछ।
त्यसोभए यो अचम्म मान्नु पर्दैन कि लाखौं व्यक्तिले अचानक उनीहरूको स्वास्थ्यमा चासो लिए र उनीहरूको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिन चाहन्थे। यदि तपाईं आवश्यक प्रक्रियाहरू अपनाउनुहुन्छ भने, शुभ समाचार यो छ कि तपाईं आफ्नो शरीरको प्रतिरक्षा तुलनात्मक रूपमा छोटो समयमा गर्न सक्नुहुनेछ।
यहाँ ways तरीकाहरू छन् जुन तपाईंलाई महामारीको बेलामा तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली कसरी बढाउने भनेर देखाउँदछ! यी9प्रतिरक्षा बूस्टिंग सुझावहरूले तपाईंलाई यस महामारीको भरमा एक किनारा प्रदान गर्दछ।
हामी सबैलाई थाँहा छ कि यो जाडोको मुकाबला गर्न र इन्फ्लूएन्जाबाट जोगिनको लागि प्राय: सुझाव गरिएको भिटामिन हो। तर मानव शरीरमा भिटामिन सी भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता छैन। त्यसो भए तपाईले दैनिक भिटामिन सी सप्लीमेन्ट लिन पर्छ। यो एक चेवाबल ट्याब्लेट, गम्मी वा एक प्रकारको हुन सक्छ जुन पानीमा विलीन हुन्छ जस्तै इमरजेन्सी-सी।
यी खतरनाक समयमा, तपाईं एक पूरक मार्फत दैनिक खुराक प्राप्त गर्न भन्दा राम्रो हुनुहुन्छ, बरुन्जेल को रस जस्सिंग वा ब्रोकोलीमा कुँवाइ गरेर आफ्नो दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा।
बारम्बार अव्यवस्थित खनिज, जिंकसँग फाइदाहरूको भरपर्दो छ। तपाईंको शरीर यो उत्पादन गर्न सक्दैन। तपाईंले सक्रिय रूपमा यसलाई उपभोग गर्न आवश्यक छ।
तपाईं सजिलैसँग स्वास्थ्य पसलबाट अनलाइन वा अफलाइन जस्ता पूरक खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। इष्टतम स्वास्थ्यको स्तर कायम गर्न दैनिक एक प्रतिशत मात्र आवश्यक छ।
जिंकले तपाईंको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन, सूजन कम गर्न, उपचारलाई छिटो पार्ने र उमेर-सम्बन्धित रोगको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ। यो विशेष गरी अब आवश्यक छ किनकि पाको व्यक्तिहरू COVID-19 मा बढी संवेदनशील हुन्छन्।
प्रोबायोटिक्सले तपाईंको पेटको स्वास्थ्यलाई बढाउनेछ र नतिजाको रूपमा, तपाईंको प्रतिरोध क्षमता बढ्नेछ। यसले एन्टिबडीहरूको उत्पादनमा सहयोग गर्दछ र प्रायः श्वासप्रश्वाससम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याहरूलाई पनि कम गर्दछ। तपाईं निश्चित रूपमा प्रोबियटिक्स खपत गर्न चाहनुहुन्छ।
दही, मिसो, कोम्बुचा, किम्ची र टिम उत्कृष्ट प्रोबायोटिक्स हुन् जुन तपाईंको आहारमा समावेश गर्दछ।
Gar. लसुन तेल पूरक
लसुन एक प्रतिरक्षा बूस्टर हो, र यसमा समावेश भएको एलिसिनको मेडिकल गुणहरू छन्। लसुन प्रकृतिको सबैभन्दा प्रभावकारी खानाहरू मध्ये एक हो र यसले रोगहरूदेखि जोगिन र सामान्य स्वास्थ्य वृद्धिमा आश्चर्यकर्म गर्दछ।
तपाईं स्वास्थ्य स्टोरबाट केहि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र क्याप्सूल वा २ दिन-दिन दिन लिन सक्नुहुनेछ। लसुन खानको लागि उत्तम छ, एक पूरक धेरै सजिलो र राम्रो छ किनकि तपाईं क्याप्सूलबाट प्राप्त एलिसिनको सहि समान मात्रा प्राप्त गर्न तपाईंले धेरै लसुन लिन आवश्यक छ।
तपाईं COVID-19 बाट वार्ड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, ड्र्याकुला होइन। निगल्न सजिलो पिलले गर्छ।
आत्म-पृथक्करणको अर्थ हाइबरनेसन हुँदैन। व्यायामले तपाईंको रक्तसंचार जाँदैछ र तपाईंको बल र सहनशीलता सुधार गरेर तपाईंको प्रतिरोध क्षमता बढाउछ।
यदि तपाईं घरमै अड्कनुभयो भने, त्यहाँ धेरै वर्कआउट्स छन् जुन तपाईं आफ्नो दैनिक व्यायाम पाउन सक्नुहुन्छ। P90X वा Insanity अधिकतम जस्तै घर कसरत कार्यक्रममा जानुहोस् र प्रयास गर्नुहोस्। यी अभ्यासहरू कत्ति चुनौतीपूर्ण छन् भन्नेमा तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। तपाईंको आफ्नै घरको सुरक्षा र आरामबाट तपाईंको कसरत गर्नुहोस्! क्यालोरीहरू बर्न गर्नुहोस् र डिमांडमा बीचको साथ ती एंडोर्फिनहरू लात हुनुहोस्!
याद गर्नुहोस् कि अत्यधिक व्यायामले तपाईंको प्रतिरोध क्षमता कम गर्न सक्छ। त्यसो भए, दैनिक कसरत गर्नुहोस् तर यसलाई बढ्तै नगर्नुहोस्। कोरोनाभाइरस वरिपरि घुम्दै, तपाईं कमजोर शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली चाहनुहुन्न।
यदि तपाईं विशेष रूपमा महिलाहरूको लागि उत्कृष्ट कसरत योजनाको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी डेनेट मेलाई पनि सिफारिस गर्छौं फ्ल्याट बेली फास्ट डीभीडी जुन उनी सीमित समयको लागि नि: शुल्क प्रस्ताव गर्दै छन्। तपाईंले तिर्नु पर्छ सबै शिपिंगको लागि सानो शुल्क हो।
हारून र पावलको संगरोध कसरत योजना यो पनि एक राम्रो विकल्प हो। हप्तामा केवल minutes ० मिनेटमा, यो अनलाइन, गृह कसरत योजनाले तपाईंलाई जिम बिना कसरत गर्न मद्दत गर्दछ जसको अर्थ तपाईं आकारमा लिन सक्नुहुन्छ, तौल घटाउन सक्नुहुन्छ, र कोरोनाभाइरस क्वारेन्टाइनको बखत बलियो बन्न सक्नुहुन्छ।
पसीना गर्न व्यायाम गर्नुहोस् र आफ्नो मुटु पम्पिंग प्राप्त गर्नुहोस्, तर थकानको लागि आफैमा दैनिक काम नगर्नुहोस् र तपाईंको मुख्य स्नायु प्रणालीलाई अनावश्यक रूपमा कर लगाउनुहोस्।
दैनिक to देखि hours घण्टा निद्रा पाउनुहोस्। राम्रोसँग विश्राम पाएको शरीर धेरै स्वस्थ र बढी शक्तिशाली शरीर हो।
7। तौल घट्नु
जब तपाईं तपाईंको अधिक पाउन्ड बहाल्नुहुन्छ, तपाईंको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। सबै किराना पसलहरूमा खाद्यान्न अभावका साथ, अब तौल घटाउनको लागि एक अन्तराल्य उपवास योजना अपनाउने जस्तो उत्तम समय हो।
के अन्तर्गतमा उपवास सबै कुराको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ? अस्थायी उपवास मुख्य रूपमा तपाइँ के खानको बारेमा हुनुहुन्न… दिनको समयमा कहिले खानुपर्दछ भन्ने बारेमा यो बढी हो। यो मूलत: एक खाने बान्की हो जुन उपवास र खाने अवधिहरूको बीचमा चक्र हुन्छ। यसले कुन खाना खानुपर्दछ भनेर निर्दिष्ट गर्दैन तर बरु जब तपाइँ उनीहरूलाई खानुपर्दछ। यस सन्दर्भमा, यो परम्परागत अर्थमा खाना होईन तर खाने कुराको रूपमा अधिक शुद्ध रूपमा वर्णन गरिएको छ।
लीन फास्ट आरएफएल एक १२ हप्ताको अन्तराष्ट्रिय उपवास कार्यक्रम हो जुन तपाईं आफ्नो घरको आरामबाट सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। यो विस्तृत मार्गनिर्देशकहरू, क्यालकुलेटरहरू, प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू र अधिकको साथ आउँदछ जुन तपाईंलाई शरीरको बोसो गुमाउन, मांसपेशिहरू कायम राख्न, र दुबै, खेल खेलने शरीरको निर्माण गर्न तपाईले ठीक के गर्नुपर्दछ भनेर देखाउँदछ।
तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिनेछ र तपाईंको स्वास्थ्यमा ठूलो सुधार हुनेछ यदि तपाईंले एक उचित भोजन योजना अनुसरण गर्नुभयो र आफ्नो आदर्श वजनको लागि तपाईंको मार्ग बनाउनुभयो भने। यदि तपाईंले सलाद खानुहुन्छ (जुन हामी सिफारिस गर्दछौं) तपाईंको वजन घटाउने योजनाको भागको रूपमा, हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं कि यसमा एक नजर राख्नुहोस् वजन घटाउन को लागी शीर्ष सलाद ड्रेसिंग सामग्री.
Bre. ब्रेकिंग लत
चुरोट छोड्नुहोस्। तपाईको रक्सीको सेवन कम गर्नुहोस्। तपाईंको चिनी सेवन काट्नुहोस् र तपाईं हुन सक्ने कुनै पनि अस्वास्थ्यकर बानी छोड्ने लक्ष्य राख्नुहोस्।
यो गाह्रो हुनेछ ... तर त्यो आशा गरिन्छ। कठिनाईलाई स्वागत गर्नुहोस् र यसलाई पार गर्नुहोस्। एकचोटि यी हानिकारक बानीहरू हटाइए पछि, तपाईं एक ब्राण्ड नयाँ जस्तो महसुस गर्नुहुनेछ।
Ind। व्यक्तिगत स्वच्छता
मौलिक सरसफाई जस्तो कि नियमित रूपमा आफ्नो हात धुनु, तपाईको अनुहार नछोड्दा तपाई बाहिर हुँदा र तपाई घर फर्कने क्षणमा नुहाउने जस्ता सबै महत्वपूर्ण तर सजिलो दिनचर्याहरू हुन् जसले तपाईको शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढावा दिन्छन्।
जब तपाईं घरबाट बाहिर आउनुहुन्छ, सोफे वा ओछ्यानमा नबस्नुहोस्। तपाईको कपडामा केटाणुहरू छन् भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्न ... र तपाईंले त्यसलाई तपाईंको घरको अन्य उत्पादनहरूमा पनि फैलाउन आवश्यक पर्दैन। तपाईंको कपडा तुरुन्तै वाशिंग मेशिनमा राख्नुहोस्, नुहाउनुहोस्, त्यसपछि केही सफा लुगा लगाउनुहोस्।
महामारीको क्रममा तपाईको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कसरी बढाउने भन्ने बारेमा यी tips सुझावहरूलाई अँगालेर तपाईले आफ्नो शरीरको प्रतिरोध क्षमता बढाउनुहुनेछ र तपाईलाई COVID-१ or वा तपाईको शरीरमा बसोबास गर्ने कुनै पनि बिरामी बिरूद्ध लड्न अवसर प्रदान गर्नुहुन्छ।